Famantarana hahafantarana raha mila manova ny finday Android | Androidsis
Ahoana no ahalalako ny fotoana hanovana ny findaiko? Fanontaniana iray izay azo antoka fa mihoatra ny iray no tonga indraindray. Soa ihany, amin'ny telefaona Android antsika ihany ny valiny. Hatramin'ny fandehan'ny fotoana, manome antsika famantarana ny telefaona izay fambara mazava fa tonga ny fotoana hanovana smartphone. Ary mora fantarina kokoa izy ireo noho ny eritreritry ny maro.
Noho izany, eto ambany izahay mamela anao ireo famantarana izay mampitandrina antsika fa ho avy ny fotoana mitady telefaona Android hafa. Ny dikan'ny hoe manomboka consulting indray izay eo amin'ny tsena na ny Lafiny hodinihina.
1 Tsy fahampian'ny habaka
2 Miadana miadana
3 Fiainana batterie
4 Android taloha
5 Famaritana efa lany andro
Tsy fahampian'ny habaka
Iray amin'ireo olana matetika matetika atrehantsika rehefa efa kelikely ny smartphone Android. Ho hitanao fa na inona na inona ataonao, dia foana lany ny habaka amin'ny telefaona anao. Na dia mampiasa safidy isan-karazany aza ianao fomba hanafoanana ny habaka, ho foana ny telefaona aorian'ny fotoana fohy.
Ity dia zavatra iray mety hitranga noho ny antony maro. Mety ho mavesatra be ny fampiharana, indrindra aorian'ny fanavaozana. Tokony ho ao an-tsaina ihany koa fa misy ny mpampiasa manana fitaovana miaraka amin'ny habaka fitahirizana mihena, manodidina ny 8 na 16 GB amin'ny tranga sasany. Io dia mametra fatratra ny fahafahan'ny fitadidiana.
Na dia manaraka ny torohevitra manampy ny finday Android aza isika mijanona milamina amin'ny fotoana rehetra, misy fotoana izay mandeha miadana. Izany dia zavatra izay nitranga taminao indraindray. Misy fihenam-bidy mazava eo am-perinasa Amin'ilay fitaovana. Mieritreritra fotsiny ianao rehefa manao dingana isan-karazany, ary amin'ny fotoana maromaro dia mety ho tratra tanteraka ianao.
Miharihary izany raha na eo am-panatanterahana ny asantsika isan'andro aza isika tsikaritray fa miadana ny finday. Raha manokatra rindranasa izay ampiasaintsika matetika, na amin'ny tranokala tsotra fotsiny dia efa manome olana isika, matetika dia famantarana mazava izany. Indraindray ny fampisehoana miadana dia mety mifandraika amin'ny tsy fahampian'ny habaka, fa raha nanafaka toerana ianao na tsy dia be loatra ny habaka azonao, dia efa fantatray fa miankina amin'ny rafitra izany.
Ny bateria findainao Android dia manana fiainana manokana. Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ny fampiasana telefaona manokana sy ny tsingerin'ny famahanana, dia mivoaka eo aminy ny akanjo. Zavatra miteraka fihenan'ny fizakan-tenan'izy ireo. Raha efa kelikely ny telefaoninao dia zavatra mety ho tsikaritro izany. Ho hitanao fa maharitra kely ny bateria.
Na dia mampiasa any ianao fika hampitomboana azy, tsy hanao an'ity fanovana ity ianao. Ankoatr'izay, na dia manaraka ny torohevitra hitandrina ny bateria amin'ny toe-javatra tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra aza ianao, dia tsy azo ihodivirana ny fiakaran'ny akanjo sasany ary hihena ny fahaizany. Amin'ny telefaona maro azontsika atao ny manova ny bateria. Na dia miankina amin'ny taonan'ny telefaona sy ny vidiny aza dia misy tranga izay mandoa vola hividianana smartphone Android vaovao.
Ny iray amin'ireo famantarana mazava indrindra fa antitra ny findaintsika Android dia mety ho izany ny kinova izay ananantsika dia somary lany andro. Eo afovoan'ny tetezamita eo amin'i Oreo sy i Pie isika izao. Oreo dia tokony ho ny dikanteny be mpampiasa indrindra eny an-tsena, mety afaka iray volana izany.
Etsy ankilany, fomba iray hahafantarana raha efa antitra ilay kinovanao raha nijanona tsy nahazo fanavaozam-baovao ianao. Ny ankamaroan'ny marika amin'ny Android dia matetika manome fanavaozana roa taona, na dia misy telefaona aza izay mahazo fanavaozana ny rafitra fiasa fotsiny. Raha mitsahatra tsy manana fanavaozana ianao dia famantarana mazava fa tsy hanohana anao intsony ny mpanamboatra.
Ary koa, ny fampiasana kinova Android somary taloha dia manana olana hafa. Satria maro miato ny fanohanana sy ny fifanarahana ny fampiharana. Ka rehefa mandeha ny fotoana dia tsy afaka mampiasa rindranasa sasany ianao, toy ny mitranga amin'ny Chrome, amin'ny findainao. Misy zavatra manery anao amin'ny farany hitady finday finday vaovao amin'ny farany.
Famaritana efa lany andro
Fomba iray hafa azontsika ampiasaina hahalalana raha tonga ny fotoana hividianana telefaona Android vaovao, dia ny manamarina ny antsipirian'ny telefaona. Azontsika atao ny mahita ny fahasamihafana misy amin'ireo fitaovana hafa izay eo an-tsena ankehitriny. Hanampy antsika hahita an'io izany.
Ohatra, ny sensor sensor fahita fahita amin'ny finday Android io ankehitriny (na eo ambadika na atsangana ao anaty efijery). Raha tsy manana ny findainao finday avo lenta dia hitantsika fa somary lasa aoriana kely io resaka io. Fakantsary ihany koa ny fakan-tsary. Nisy fihatsarana lehibe teo amin'ny sehatra teo amin'ny tsena.
Raha ratsy ny fakantsarintsika, Fanehoana mazava izany fa tsy miankina amin'ny zavatra eny an-tsena. Indrindra fa mahita telefaona fakan-tsary roa izahay eo anelanelany, toy ny zavatra mahazatra. Zahao ny antsipirian'ny telefaonao dia ho fantatrao raha toa tokony havaozina izy na tsia. Azontsika atao ny manandrana manao azy haharitra kokoa, fa misy kosa fotoana tsy hiasa intsony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana no hahalalanao raha tonga ny fotoana hanovana telefaona Android
Ny Galaxy Note 9 dia manomboka mahazo ny beta an'ny Android 9 Pie miaraka amin'ny UI iray